Siemens iyo Bentley Systems waxay xoojinayaan isbahaysiga istiraatiijiyadeed iyo dadaallada maalgashiga wadajirka ah - Geofumadas
Kordhinta cusub ee la-socda ayaa ka dhigaysa jawiga xogta ku xiran ee Teamcenter iyo Bentley si loo kordhiyo wax-soo-saarka beeraha, dardar gelinta iyo dhimista kharashaadka.
Istaraatiijiyadda cusub ee casriga ah ee casriga ah waxay abuureysaa mataano iyo jaanis dhab ah oo geedi socodka iyo geedaha jireed si ay u maareeyaan kakanaanta iyo isku dayaan waxqabadka dhirta caqliga ah.
Siemens PLM Software ayaa ku dhawaaqay maanta la Systems Bentley, shirkadaha isku dhafan si fiican siiyaan mashaariicda, isku faylalka Teamcenter® la ProjectWise iyo Bentley ku xiran jawiga xogta (CDE) xal. Teamcenter waa maaraynta nidaamka maamulka wax soo saarka nolol-wareegga (PLM) ugu isticmaalo dunida oo dhan iyo waa madal ay iskaashanayaan ProjectWise loo gaarsiiyo mashruuca 43 50 oo ka mid ah shirkadaha ugu wanaagsan ee design ee Engineering News Record. Heshiiska cusub sii isbahaysiga istiraatiijiyadeed ee Siemens iyo Bentley lagu dhawaaqay in 2016, oo si gaar ah loo ballaariyo aragti ganacsi iyada oo injineernimada maamulka barnaamijka iyo dhismaha mashaariicda.
Marka loo guurayo teknolojiyada dhijitaalka ah, shaqada injineerada iyo dhisayaashu waxay sii kordhayaan iyagoo kusalaysan duruufaha dijitaalka ah iyo waxyaabaha dijitaalka ah ee ku xeeran iyo gudaha mashruucyadooda kaabayaasha ah,,
ayuu yiri Greg Bentley, oo ah Maamulaha Bentley Systems.
“Maaddaama aan warshadeynayno gaarsiinta mashruuca, waa wax aan ku faraxsanahay inaan la shaqeyno Siemens si aan u kordhinno gaaritaanka barnaamijyada dhijitaalkayaga ah ee CDE ee ka baxsan mashaariicda shaqsiyadeed ee shaqsiyadeed. Isku-darka isugeynta 'Teamcenter PLM', isku xirnaanta mataanaha dhijitaalka ah ee mashruucan ayaa hadda ku fidin kara duruufaha ganacsigooda oo ay u sii ballaarin karaan qaybaha wax soo saarkooda: horumarinta kaabayaasha iyada oo loo marayo DNA dhijitaalka ah! «
Taasoo keentay awoodaha nidaamka injineernimada iyo maamulka shuruudaha in Teamcenter, iyo jilidda meertada nolosha loogu talagalay ka kooban, ayaa haatan la dhammaystirayaa Bentley CDE ku daray inuu soo qabto mashruuca digital mataano. Labada mataano ee mashiinka mashruuca ayaa si toos ah u dhigma iskudhafka dhijitaalka ah iyo isbeddelka isdhexgalka ee isugeynta mashruuca, kaas oo u oggolaanaya dib u eegis joogto ah oo dibadeed. Tirinta warshad laga bilaabo bilawga mashruuc ayaa u oggolaanaysa isu-geynta iyo faafinta xogta qaab habboon oo la maareyn karo. Iyadoo lagu xirayo naqshad digital ah oo leh nambar casri ah, shirkaduhu waxay yareeyn karaan kharashyada bixinta mashruuca waxayna ka fogaanayaan qiimaha kharashka badan, waxayna hagaajin karaan dhaqdhaqaaqa hawlaha iyada oo kordhinaysa wax soo saarka beeraha iyo yaraynta kharashyada hawlgalka. Shirkaduhu hadda gaari karo socodka shaqada digital taxan daboolaya dhaqaalaha mashruuca, maamulka barnaamijka oo gacanta ku mashruuca si loo dardar-bixinta mashaariicda, yareeyo kharashka xad-dhaaf ah iyo in la wanaajiyo natiijada mashruuca u waafaqayaan ujeedooyinka.
Shirkadaha tamarta iyo adeegga dadweynaha, tusaale ahaan, la siiyay saadaalinta tamarta, shirkadu waa inay si firfircoon uga shaqeeyaan marka ay fulinayaan mashaariicda horumarinta dhaqaalaha. Dhaqan ahaan, mashaariicdan qaaliga ah oo qaali ah ayaa leh kooxo badan oo ka baxsan injineernimada iyo dhismaha, kuwaas oo si madaxbannaan u shaqeeya mashruuca. Teamcenter kordhin loo marayo bixinta mashruuca, CDE ogol aragti ka badan lagu daydo wireless digital xiran 2D iyo 3D dynamically maamulo si ay u muujiyaan xaaladda mashruuca. Tani waxay u ogolaaneysaa design milmaan xog joogto ah iyo injineernimada, la heli karo aragga iyo falanqeey, sida ku haboon, by xubnaha kooxda guud ahaan silsilad ganacsi iyo sahayda. Daydo daraysa injineernimada iyo dhismaha mashaariicda ee sidan dhafan ogolaanaya thay kala duwan oo dhan geeddi-socodka maamulka mashruuca si rajayn dhibaatooyinka nolosha dhabta ah iyo go'aan qaadasho xog dheeraad hoos faham-waqtiga dhabta ah ee saamaynta isbedel naqshadeynta. Xalku wuxuu diyaar u noqon doonaa suuqa bilowga 2019.
«Mulkiileyaasha / hawl wadeenada iyo injineerinka, iibsashada iyo dhismaha (EPC) shirkadaha warshadaha waxay u baahan yihiin inay yareeyaan kharashaadka ayna gaarsiiyaan mashaariic si hufan, iyo xalkaan cusub ee dhijitaalka ah wuxuu u fududeynayaa habsami u socodka howlaha xogta ku saleysan barnaamijyada iyo geedka »,
ayuu yiri Tony. Hemmelgarn, Agaasimaha Maamulka Siemens PLM Software.
"Ayadoo la adeegsanayo teknolojiyada mataanaha dijitaalka ah, xalkaani wuxuu u oggolaanayaa xogta injineernimada in ay dhexmarto daneeyayaasha mashruuca caasimadda, waxayna aqbali doontaa kiisas badan oo adeegsiga warshadaha ah."
Siemens PLM Software, unit ganacsiga ee Siemens Digital Factory Division ah, waa bixiye keentay caalami ah oo xal software in la wado isbadal digital ee warshadaha, abuurista fursado cusub saarayaasha si ay ugaaraan hal-abuurnimo. Xarunteeduna tahay magaalada Plano, Texas, iyo in ka badan 140,000 macaamiisha adduunka oo dhan, Siemens PLM Software shirkadaha ka kooban shaqeeya inay u beddesho hab fikradaha soo noolaaday, waxyaabaha jidka waxaa la soo saaray iyo sida taas oo badeecooyinka iyo hantida loo isticmaalo oo la fahmo. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan alaabta iyo adeega Siemens PLM, booqo www.siemens.com/plm.
Siemens AG (Berlin iyo Munich) waa u xoogga caalami ah farsamada ka dhigan heer sare injineernimada, hal-abuurnimo, tayada, isku halaynta iyo internationality badan 170 sano. Shirkaddu waa mid firfircoon aduunka oo dhan, diiradda saaraya aagagga korontada, farsamada iyo dhijitaalka. Siemens waa mid ka mid ah soo saarayaasha adduunka ugu ballaaran ee tiknoolajiyada tamarta tayada iyo kheyraadka kaydka ah. Siemens waa bixiyaha hoggaamineed ee xal hufan ee korontada iyo gudbinta xoog iyo waxay horyaal ee kaabayaasha xal bixiyaha, iyo sidoo kale xal qalabaynta, eryi iyo software for warshadaha. Shirkadda ayaa sidoo kale waa bixiyaha hoggaamineed ee qalabka imaging caafimaad, sida nidaamyada lagu xisaabiyaa si raajito iyo magnetic resonance imaging, iyo hoggaamiye ee Baadhista shaybaarka iyo IT kiliinikada. Sannaddii 2017 maaliyadda, taas oo ku dhamaatay on September 30 2017, Siemens ahaan dakhliga of € 83.0 bilyan oo dakhliga saafiga ah ee € 6.2 billion. Dhamaadkii Sebtembar ee 2017, shirkaddu waxay hareeraha shaqaalaha 377,000 ee adduunka oo idil ka socotay. Macluumaad dheeraad ah waxaad ka heli kartaa internetka www.siemens.com.
Bentley Systems waa hogaamiye caalami ah bixinta injineerada, injineero, xirfadlayaasha geospatial, constructors, iyo milkiilaha-wadayaasha xal dhamaystiran si loo horumariyo howlaha design software, dhismaha iyo kaabayaasha. Isticmaalayaasha Bentley waxay ka faa'iidaystaan ​​dhaqdhaqaaqa macluumaadka kudhisan maaddooyinka iyo dhammaan wareegyada wareegga nolosha ee dhismaha si ay u fuliyaan mashaariic iyo hantidooda wax qabad wanaagsan. xal Bentley ka mid ah codsiyada Qaabaynta macluumaad MicroStation, adeegyada iskaashi ee ProjectWise in la hirgaliyo mashaariicda iyo adeegyada hawlaha isku dhafan AssetWise si loo gaaro kaabayaasha caqli badan, dhammaystirayaa adeegyada dhamaystiran maamula bixiyo qorshaha guul shakhsi ahaan
Waxaa la aasaasay 1984, Bentley waxay qabatay saaxiibbo 3.500 ah oo ka badan wadamada 50 waxaana ay wadada u socotaa in ka badan heerka dakhliga sanadka ee $ 700 million. Tan iyo 2012, Bentley waxay maalgelisay in ka badan $ $ billion ee 1 ee cilmi baarista, horumarinta iyo iibsiga. Www.bentley.com
Post Previous" Hore Kuwa ku guuleysta abaalmarinta “Sannadka Kaabayaasha”
Post Next 6 daabacaadda geo-engineering ee bilaash ahNext »